HALKAAN KA AQRISO W/WARGEYSKA MOGADISHU TIMES ARBACO 15-KASEPTEMBAR 2021-KA
Wednesday September 15, 2021 - 08:03:23 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dham aaday ee Maxamed C/hi Farmaajo ayaa munaa sa-bad ku qabsoontay Madaxtooyada Qaran ka waxa uu kaga guddoomay warqa-daha aqoon-si ga danjiren-imo safiirka cusub ee Boqortooyada Sweden u soo magacawday Somaliya Md.Per Lindg-arde.
Danjiraha Boqortooyada Sweden Md.Per Lindg arde oo Madaxweyna ha JFS la wadaagay farriin & salaan ah oo uu uga siday Boqorka Sweden Md. Carl XVI Gustaf ayaa soo bandhigay dadaal ka uu ku bixin doono adkaynta xiriirka saaxiibtin nimo ee 2da dal, isaga oo dowl-adda & shacabka Somaliyed uga mah-adceliyey soo dhoweynta diirran.
Farmaajo iyo Danjire Lindgarde ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Sweden, kaas oo ku dhisan wax wada qabsi, is-ixtiraam si loo adkeyo iskaashiga dhinacyada amniga, gargaarka bi ni’ aadannimada, dhaqaalaha, maalgashiga, hor u marinta & arrimaha bulshada.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Soomaaliya Md.Farmaajo ayaa Danjiraha Cusub ee Sweden ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay, waxa uuna u sheegay inuu soo dhoweyn wanaagsan kala kulmi doono shacabka Soomaaliyeed, DFS ayna ku garab istaagayso gudashada waaj ibaad ka diblumaasiyadeed ee loo soo igmaday.
RW Rooble oo la kulmay hay’addaha amniga, isaga oo amar siiyay
R/Wasaare Rooble ayaa la kul-may Tali yaha Cusub ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sir doon ka Qaranka, Hoggaanka Maxkamadda Cii dam mada Qalabka sida iyo Taliyeyaasha Nabad sug idda iyo Booliska ee Gobolka Banaadir.
Qoraal kasoo baxay xafiiska R/Wasaaraha ayaa lagu yiri:
"Ra’iisul Wasaaraha ayaa faray Xeer Ilaalinta iyo maxkamadda Ciidammada Qalabka sida in ay baaritaan rasmi ah oo deg deg ah ku sameya an kiiska Ikraan Tahaliil Faarax.
R/Wasaaruhu waxa uu faray Agaasimaha cus ub ee hay’adda NISA iyo taliyeyaasha nabad sug idda iyo booliska G/Banaadir inay maxkamadda gacan buuxda ku siiyaan gudashada waajibkee da, maadaama ay horay u jireen caqabado ay ka cawdeen guddigii horay loogu saaray kiiska Ikra an”.
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyad eeyay geerida Suldaan Cumar Suldaan Maxamed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Fa rmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qa raabada,bahda dhaqanka & ummad da Soomaa liyeed ee uu ka baxay Al le ha u na xariistee Sul daan Cumar Suldaan Maxamed Su ldaan Faarax oo ku geeriyooday dalka Turkiga.
Madaxweynaha ayaa xusay in Marxuum Sulda an Cumar Suldaan Maxamed uu ka mid ahaa tii rarka hoggaanka dha qanka Soomaaliyeed ee do orka mu uqda kasoo qaatay nabadda, xasill oonida, dib u hesh isiinta & adkey nta wadajirka sha cabka, gaar aha an bulshada ku dhaqan gobolla da Waqooyi ee dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa Marxuumka Alle u weydiiyey inuu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyski isa iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday.
Urrurada Bulshada Rayidka oo Afar qod ob kasoo saaray khilaafka Farmaajo
Urrurada Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxaa ay walaac xoogan ka muujiyeen khil aafka aan weli xalka laga gaarin ee u dhaxeeya Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaad ay ee Maxamed C/hi Farmaajo & R/Wasa-araha XFS Maxamed Xuseen Rooble.
Qoraal ay soo saareen Urrurada Bulshada ray idka ayaa waxaa ay ku sheegeen inay aad uga xun yihiin is afgarad la’aanta madaxda dalka ee la xiriira khilaafka awo-odaha sharciya dowlada deed ee soo kala dhex galey 2da mas’uul ee Far maajo iyo Rooble.
Sidoo kale Urrurada Bulshada rayidka waxaa ay sheegeen in Khilaafka siyaasadeed ee madax da dalka uu niyadjab ku ridey Dadka Soomaliy eed oo filaayey in dalka ay ka qabsoomaan doo rashooyin si nabad ah ku dhaca dalkana u ho-rse eda isbedel wanaagsan oo horumar leh.
"Bulshada rayidka waxa ay aaminsan tahay in khilaafka siyaasadeed saameyn ku yeelan karo hay’adaha dowlada si taas looga waantoobo wax aa lagama maarmaan ah in madaxda dalka ay muujiyaan mas’uuliyad dheeri ah oo lagu xakame enayo khilaafka siyaasadeed oo u eg mid gacan ta ka sii baxayo ayaa lagu yiri” Qoraalka Urrura da Bulshada ragidka.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen inay welwel weyn ka muujinayaan saameynta uu khilaafka si yaasadeed ku keeni karo geedi socodka doora shooyinka, nabada iyo degenaashaha dalka & no lasha shacabka Somaliyeed oo waqti adag ku jira
Ugu dambeyn Urrurada Bulshada ra-yidka ay aa waxaa ay soo bandhigeen 4 qodob oo xal u noqon kara khilaafka Mad-axda dowladda & dha meynta kiiska Ikraan Tahliil, kuwaas oo kala ah.
1. In arinta Ikraan Tahliil aanan la siyaa-sad een, waxaana soo jeedineyna in baaritaan dhab ah lagu sameeyo loona madaxbaneeyo maxka mada ciidamada ee dacwada Ikraan gacanta ku hayso.
2. Inuusan marnaba istaagin wada hadalka u dhaxeeya madaxda dalka si loo dhameeyo Khil afka siyaasdadeed ee la xiriira awodaha sharciga
4. In hogaamiyeyaasha ay danta guud ka ho rmariyaan danaha gaarka ah & kala aragti duwa naanta siyaasadeed.
Ugu dambeyn Bulshada rayidka ayaa waxaa ay ugu baaqeen duubabka Soomaliyeed, odoy aasha dhaqanka, culumo u diinka, wax garadka, haweenka iyo aqoonyahanada Soomaliyeed in ay u istaagan sidii loo heli lahaa xal dhab ah oo lagu xaqiijinaayo dhameystirka khilaafka siyaas adeed. Warkaan ka soo baxay Urrurada Bulsha da Soomaaliyeed ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli uu jiro khilaafka u dhaxeeya Madaxwey ne Farmaajo iyo R/ Wasaare Rooble, kaas oo ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil.
Rooble oo digniin culus kasoo saaray kiiska Ikraan Tahlil
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa ka digay isku day kasta oo lagu marin habaabinayo Kiiska Ikraan Tahliil Faarax, xilli Habeen hore uu madax weynaha waqtigiisu dhamaad ay oo khilaaf xo ogan uu kala dhaxe eyo Rooble uu guddi u magacaa bay baaritaanka kiiska Ikraan.
Sidoo kale R/Wasaare Rooble ayaa faray Tal iyayaasha Ciidama da Qalabka Sida inay ka fog aadaan tallaabo kas ta oo wax u dhimi karta sumc adda ciidamada qa ranka oo dhaaw icina karta kalsooni shacabka Soomaaliyeed .
"R/wasaaruhu waxa uu la socdaa in Maxkamad da C/Q/Sida uu ka fur an yahay gal dacwadeed ku saabsan kiiska Ikra an Tahliil Faarax, kaas oo waafaqsan qodo bka 34-aad ee dastuurka dalka oo qof kasta xaq u sii naya inuu dacwadii sharciga waafaqsan ka furto maxkamadda awooda u leh,” ayaa lagu yiri qo raalka ka soo baxay xafiiska Rooble.
Taliyaha qeybta Booliska Qeybta G/Baay G/le Sare Aamin Maxamed Daruur ayaa Dorraad shir gudoomiyey shirka Todobaadlaha gollaha Amn iga Do-wlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Shirka ayaa waxaa looga hadlay u diyaar gar oowga Howlgalloada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidii loo xoojin lahaa Am-niga guud ee degaa nnada Koonfur Galbeed.
sidoo kale shirka waxaa sigaar ah diirada loogu saaray sidoo loo sugi lahaa amniga Mag aalooyinka Baydhabo iyo Bara-awe oo ka dha cayso doorashada Xildhiba-anada Aqalka hoose ee Baarlamaanka So-omaaliya.
Taliyaha qeybta Booliska Qeybta G/Baay G/le Sare Aamin Max-amed Daruur ayaa faray Saraakiisha ka qeyb gashay kulanka inay dardar geliyaan ho-wlaha sugida amniga iyo dagaalada ka dhan ah Al-Shabaab.
Dhawaan Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed laft-agareen iyo Taliyaha qeybta 60aad ee CXD waxaa ay sheegeen in Al-Shabaab laga saari doono degaannada
ay kaga sugan yihiin K/Galbeed.
Muuse Suudi oo mar kale loo doortay Senator ka tirsan Aqalka Sare tartanka
ugu adkaa ee hirshabeele ka dhacay
M/Jowhar ee Caasimadda Maamulka Hirshab eelle ayaa waxaa lagu soo gaba-gabeeyay war eega 3aad ee kursigii ugu horreeyay ee doorash ada ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaal ka ee laga soo doorto deegaanad a Maamulka as.
Wareega 3aadn ee doorashada ayaa waxaa ku tartamay 2 Mu sharax oo kala ah Muuse Suudi Yalaxow & Axmed Xuseen Cadd ow Daaci, kuwaasi oo ku soo bax ay wareegii koowaad ee doorashada ka socota Jowhar.
Musharax C/hi Sheekh Xasan oo isna kusoo baxay wareegii 1aad ee doorashada ayaa ku ha ray wareega 2aad, isagoona tanaasulay, wuuxu na markii hore helay codad gaaraya 15 Cod, hal ka Dr.Caddaay oo wareegii1aad ku haray oo hel ay 2 Cod.
Xildhibaanada Hirshabeelle ayaa Muuse Suudi Yalaxow u doortay inuu mar kale kamid noqdo Senatorada Aqalka Sare ee Maamulkaas ku met elaya BFS, wuxuuna helay codad gaaraya ilaa &55 Cod, halka Axmed Daaci uu helay 43 Cod.
G/Baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqm aan Xaaji Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiija da doorashadii ka dhacday M/Jowhar, wuxuuna shaaciyay in Muuse Suudi uu ku guuleystay kur sigii ugu horreeyay Aqalka Sare ee Hirshabeelle.
Sidoo Kale Doorashada kursiga 2aad ee Aqalka Sare ayaa waxaa ku tartamay 2 Musharax oo ka la ah Nuur Maxamed Geedi Canjeex iyo Maxam ed Cusmaan Dhega-Juun oo 4-tii sano ee la soo dhaafay ka mid ahaa senatarada Aqalka Sare ee BFS. Nuur Maxamed Canjeex ayaa markii ugu horeysay ka mid noqday Senatarada Aqalka Sa re, isagoona ka guuleystay Dhega-Juun, wuxuu na Musharax Nuur helay codad gaaraya 70 Cod, halka Maxamed uu isna helay 27 Cod.
Sidoo kale Fartuun C/dir Faarax Karaama ay aa Cod gacan taag ah ku ku soo baxday, ka dib markii ay u tanaasushay Sacdiyo Yarow oo la tar tameysay. waxaana ay Maamulka hirshabeelle ku uuleysteen qbashada 3 Senator oo Xalay la gu doortay M/Jowhar Doortaykuraasta 2aad & mi dka 3aad ee Aqalka Sare ee BFS ayaa Xalay ka dhacday M/Jowhar ee Xarunta G/ Shabeella ha Dhexe taasoo lagu bogaadiyeymaamulka hir shabeelle sida caddaalada ah oo looga tartamay.
Xildhibaan Aamina: Farmaajo wuxuu caddeeyey inuu ku lug leeyahay kiiska
Aamina Maxamed oo ah xildhibaanka golaha shacabka ku metesha beesha ay ka dhalatay Ikr aan Tahliil Faarax ayaa sheegtay in Farmaajo uu cadeystay inuu ku lug leeyahay kiiska Ikraan, ka dib markii uu soo magacaabay gu ddi ay sheegtay inuu ku car-qal adeynayo baaritaan ka kiiska ga badhooda.
Waxay sheegay in Farmaajo uusan marnaba diyaar u aheyn in kiiska Ikraan uu cadaalad ku dhamaado,taasna ay cadeyn u tahay 2 tallaabo oo uu qaaday, kuwaas oo kala ah inuu diiday xil ka qaadistii Fahad Yaasiin iyo magacaabidda gu ddigaan cusub. Waxay sheegtay inay la yaabeen markii uu Farmaajo qoraalkiisa ku yiri Taliyaha NI SA ayaa soo magacaabaya xubin ka mid ah gud diga oo wax ka baarta dembiga loo heysto NISA.
"Marar badan waxaa lagu celceliyey Madaxw eynahaa hor taagan arrinta Ikraan, laakiin Xalay waa uu cadeystay,Farmaajo haddii kiiskaan uusan ogeyn oo isaga uusan amrin, maxuu ugu diidan yahay cadaaladda? R/wasaaraha waxaan leeyahay waalidka Ikraan iyo umadda Soomaaliy eed adey kugu qanacsan yihiin oo cadaalad noo ballan qaaday markii ay Hooyo Qaali Ooysay,” ayey tiri Xildhibaan Aamina Maxamed.
"Ikraan meel halagu sheego, hadey dhimatay Me ydkeedii noo keena, hadaan 2daba laheyna dad ka aan tuhmeyno ee dacwadooda maxkamadda la geeyey hanaloo maxkamadeeyo,” ayey hadal keeda sii raacisay Xildhibaan Aamino.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa sheegtay in u je edka uu Farmaajo ka leeyahay guddigaas ay tah ay in la baabi’yo kiiska, sida horay looga bartaba dhowr kiis oo guddi loo magacaabay, ka dibna ay san waxaba ka soo naasa cadaan.
Gobolka Banaadir oo qaaday tallaabo cusub oo ka dhan ah Yardimeli iyo Jaziira
Maamulka G/Banaadir ayaa Shalay shaac iyey magacaabista guddi cusub oo ka shaqeyna ya Maareynta & La-wareegida Is bitaalada Yar dimeli & Jaziira ee G/Banaadir, xilli weli ay taagan ta hay xiisadda ka dhalatay isku day gan. Maamulka ayaa hore ugu qabtay muddo 7b aad ah in lagu soo wareejiyo maamullada Isb itaalada Jaziira & Yardimeli, ayada oo 8-dii bish aan loogu daray 7baad kale, si loo xaqiijiyo hufna anta &lasoo wareegista maamulida 2daas Isbital.
Afhayeenka G/Banaadir oo shir jaraa’id ku qab tay M/Muqdisho ayaa shaaciyey guddigaas cus ub, oo ka kooban 8 Xubnood, kuwaasi oo kala ah;Maxamed Maxamuud Cadow,Saynab Warsa me, Mucaawiye Muudeey, Maxamed Cantooba, C/dir Dalxa, C/hi Caraaye, Mukhtaar Dhagaca de iyo Saalax Xasan Cumar.
"Guddiga sare ku xusan waxaa aad loogu ad keynayaa inay sida ugu dhaqsaha badan u gudo galaan howlahooda shaqo ee ku xusan wareegt adan.Maamulka 2da Isbitaal waxaa la farayaa in si hufan ula shaqeeyaan guddiga la magacaabay si ay u fuliyaan waajibaadka loo xil-saaray si hab sami leh,” ayuu yiri.
"Waxaa la farayaa maamulada Isbitalaadaas in ay wax agab ah ka saari karin xarumahaas, waxa ana si gaar ah loo farayaa maamulada degmooy ina Warta-nabadda iyo Xamar Jajab inay kor-jo ogteyan hubiyaana inay hirgeliyeen amarka ku aadan ilaalinta hantida dadweynaha ee taalla labada Isbitaal.”
Maamulka G/Banaadir ayaa 1-dii Bishan Sep tember soo saaray amar ku socda 2daan Isbital, oo ah in muddo 7baad ah lagu soo wareejiyo ma amulka 2daan isbitaal.
2dan isbitaal ee Yardameeli iyo Jaziia ayuu ma amulka G/Banaadir ku eedeeyay in adeegyada ay u qabtaan bulshada ay tahay kuwo dhaqaale badan loogaga qaato. "Isbitaaladaa kor ku xusan oo loogu talo-galay in bulshada G/Banaadir ugu shaqeeyan si lacag la’aan ah uu ka war helay ma amulka gobolka in hanaankii loogu talo-galay in loogu adeego bulshada hanaan aheyn oo u mu uqda mid ganacsi & mid gaar ahaaneed u adeeg ayaan isbitaaladaas.”
Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay Wa kiilada beesha Caalamka
Madaxweynaha maamulka Galmudug Md.Ax med Cabdi Kaariye ayaa Dorraad la kulmay qaar ka mid ah danjirayaasha bee sha caalamka u fa dhiya Soo maaliya,Kulanka oo ay Bee sha Caalamka ku matalay een Ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soo maaliya, Ergeyga M/Afrika u qaabilsan Soomaa liya & Danjirayaasha M/Yurub, Sweden, Norway, UK iyo diplomasiyiin kale.
Md.Qoorqoor & xubnaha beesha caalamka ay aa ka wada hadlay dardargelinta doorashooyin ka, amniga doorashooyinka, xaqiijinta qoondada ha weenka & taageerada beesha caalamka ee ku aaddan habsami usocodka doorashada. Kul an ka ayaa dhinaca kale looga hadlay Arrimaha hor umarinta Galmudug, amniga iyo la dagaalan ka argagaxisada sidii beesha caalamku gacan u ga geysan laheed howlahaas la soo xusay.
Jen.Muungaab oo fal dambiyeed ku tilmaam ay tallaabadii uu qaaday
Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), oo soo noqday Duqii hore ee Muqdisho iyo Guddoo miyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, ayaa ku tilmaamay tallaabada Madaxweyne Far maajo inay tahay fal dambiyeed lagu dhaawacay o habsami u socodka Cadalada ee Kiiska Ikraan.
Jen. Muunhaab ayaa sheegay inaysan jirin cid faragelin ku sameyn karta Kiiska Ikraan oo yaalla Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida.
Jen.Muungaab oo dhowaan Jaamacad ku ta al dalka Suudaan ka diyaariyay PhD Cilmiga Qa anuunka Dambiyadda ayaa sheegay inaanay jirin meel Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka kasoo ge li karo Kiiska Ikraan.Wuxuu ugu baaqay xeer ila aliyaha guud ee Qaranka inuusan u hoggaansa min guddiga uu magacaabay madaxweynaha wa qtiga ka dhammaaday ee M. C/hi Farmaajo.
Halkaan hoose ka Akhriso qoraalka uu Muung aab soo dhigay bartiisa Facebook
Alle ha u naxariisto Ikraan Tahliil Faarax, wax aan tacsi u dirayaa Ehelkeeda,Asxaabteeda iyo dhammaam umadda Soomaaliyeed. Samir iyo Iimaan Allah naga wada siiyo.
Sharci ahaan, marxuumad: Ikraan waxay aha yd sarkaalad ka tirsan Ciidanka Hay’adda NISA, sidaas daraateed, Qaadista Dacwada kiiskeeda waxay u gaar tahay (Ikhtisaas u leh) Maxkamad da C/Q/Sida, sida ku cad Qodobka 2-aad ee XHCCQS. Xeerilaaliyaha Guud ee CQS wuxuu u dhigmaa Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka wixii la xiriira Xubnaha C/Q/Sida, sida ku cad Qodob ka 1-aad ee Isla Xeerka HCCQS.
Xeer ilaalinta C/Q/sida ayaa si rasmi ah u furt ay Gal-dacwadeed ku saabsan kiiska Ikraan Tahl iil 07/09/2021, ka dib markuu Qareenka Qoyska Dhibanaha ow u gudbiyay Cabasho lidi ku ah3 ka mida mas’uuliyiintii sare ee hay’adda NISA. Gal-Dacwadeedkiina sidaas ayuu ugahor furm ay Maxkamaddii gaarka u lahayd kiiska.
Intaas ka dib, ma jirto cid faragelin karta kiiska maxkamadda yaalla oo aan isla Maxkamadda CQS ahayn, sidaas daraateed Guddiga uu maga caabay Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed Farmaajo waa Sharci darro waana is hortaag qaawan oo uu ku sameeyay Caddaalad da & habsami u socodka Dacwadda.
Tallaabada Farmaajo waa fal dembiyeed ma adaama lagu dhaawacayo habsami u socodka Caddaalada ee Kiiska Ikraam Tahliil.
Ma jirto meel uu Xeer ilaaliyaha Guud ee Qar anka kasoo geli karo kiiska Ikraan, waana inuu fa raha kala baxaa, una hoggaansamin Guddiga Vil la Somaliya laga soo magacaabay ee sharci darr ada ah, haddii kale wuxuu qeyb ka noqonayaa fal dembiyeedka lagu hor istaagayo cadaaladda.
Xeer ilaalinta iyo Maxkamadda C/Q/Sida wax aa saaran mas’uuliyad Qaran & mid Akhlaaqi ah, waana inay dhaqaajiyaan kiiska Ikraan Tahliil, iya ga oo kaliya ku dhaqmaya sharciga ee aan eega ynin dano gaara.
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay Midowga Musharaxiinta
Raysal wasaaraha X/F/Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Dorraad kulan kula qaatay M/Muqdisho Xubno ka tirsan Midowga Musharaxi inta Madaxweynaha Soomaaliya.
Kulanka dhexmaray Rooble iyo masuuliyiinta ka socotay Midowga Musharaxiinta ayaa waxaa loo ga hadlay arri mo badan oo ku saabsan xaala da siyaasadeed ee dalka, dardar gelinta arrimaha doorashooyinka iyo waliba Kiiska Ikraan Tahliil sidii cadaalada loo waafajin lahaa.
Dhinaca Midowga Musharaxiinta waxaa kulan ka fadhiyay Madaxweynayaashii hore Shariif Sh.Axmed, Xasan Sh.Maxamuud, Siyaasi C/rax maan C/shakuur, C/dir Cosoble, Ridwaan Xirsi Maxamed iyo wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale kulanka 2da dhinac uga wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa khilaafka daba dheeraaday ee ka dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo raysal wasaare Rooble.
"Waxaan Dorraad kulan mira dhal ah la yeelan nay R/asaare Rooble. Waxaan ka wada hadaln ay sidii uu kiiska Ikraan Tahliil ku heli lahaa cad daalad, looguna simo hay’adaha garsoorka, in da rdar la geliyo arrimaha doorashooyinka iyo la qa boojiyo xasaradda” ayuu yiri Musharax Mad axweyne Cabdiraxmaan C/shakuur Warsame.
Kulankaan Dorraad dhexmaray R/wasaare Ro oble iyo M/Musharaxiinta ayaa waxa uu imaana ya iyada oo weli taagan tahay khilaafka u dhexee ya Farmaajo iyo Rooble, islamarkaana la isku da yay dadaalo lagu xalinayo khilaafkooda, kaaso natiijo la'aan kusoo dhamaaday.
Tirada dhimashada qaraxii Muqdisho oo la shaaciyey iyo Rooble oo war ka
Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax is-miidaamin ah oo Shalay ka dhacay Bar Control oo ciidamo ka tirsan militeriga Soomaaliya ay ku leeyihiin afaaf ka hore ee xerada Jen.Gordon ee Muqdisho, ta as oo ku taalla meel u dhaw xarunta Xalane.
Ilo dhanka ammaanka ah ayaa u warbaahinta u xaqiijiyey in 11-qof ay ku geeriyoodeen qaraxa as,kuwaas oo u badan askar militeriga ka tirsa neyd, halka dhaawacyo badana ay jiraan, in kas too hey’adaha ammaanka ee doladda Soomaal iya aysan weli khasaaraha ka soo saarin faahfaa hin rasmi ah.
Warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab oo soo xiganeysa xubno ka tirsan hoggaanka koox da ayaa baahisay in 11 askari oo ku sugnaa xero Nacnac uu isku qarxiyey qof ay soo direen, sidoo kale 16 qof oo kale ayey sheegeen in lagu dhaa wacay qaraxaas.
R/ wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa qoraal uu soo saaray qaraxaas ka dhacay degmada Wadajir waxa uu ku yiri, "Waxa an cambaareynayaa qaraxii Dorraad argagixisa da Alshabaab la beegsadeen maqaaxi ku taalla D/Wadajir, kaas oo dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad aan waxba gal absan. Allaha u naxariisto intii dhimatay ehelado odiina Samir Allaha ka siiyo inta dhaawacantay na Allaha u boogo dhayo.”
Sidoo kale Ra’iisul wasaare Rooble ayaa um adda Soomaaliyeed ugu baaqay inay u mudoob aan la dagaalanka argagixisada."Falkan bahalni mada ahi waxa uu muujinayaa sida argagixisada Alshabaab ay ugu oon qabaan daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed si aan kala sooc lahayn, taas oo khasab ka dhigeysa in aan isu kashanno la dagaallanka argagixisada,” ayuu qoraalkiisa ku yiri Rooble.
Faa Faahin: Dagaal ka dhacay duleedka Kismaayo.
Dagaalka oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay Saldhig Ciidamo ka tir san kuwa D/G/Jubbaland ku leeyihin duleedka M/Kismaayo ee G/Jubbada Hoose.
Dagaalka ayaa waxaa uu yimid kad-ib markii si da la sheegay Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay we erareen Saldhiga Ciidamada jubbaland ku leeyih iindegaanka Cabdalla Biroole ee duleedka Kism aayo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan saacad socday.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay ku warrameen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adee gsanayeen 2da dhinac, isla markaana uu jiro kha saaro ka dhashay, hayeeshee ay sheegeen in si rasmi ah u xaqiijin karin dadka ku waxyeeloobay dagaalkaas. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaarayadegaanka Cabdalla Biroole ayaa wa xaa ay sheegayaan in Ciidamada Jubbaland ay Dorraad howlgallo kala duwan ka wadaan duleed ka degaankaas, kaas oo ka dhan ah Al-Shabaab.
Gabdho u dhashay Soomaaliya oo lagu dilay Dalka Austria.
Magaalada Vienna ee dalka Austria gaar aha an Xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida ayaa waxaa laga helay Maydka laba gabadhood oo So omaali ah, kuwaas oo sida la sheegay la dilay. Gabdhaha oo Magacyadooda lagu kala sheegay Shukri Axmed Abtidoon iyo Faaduma Maxamed Xirsi ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen Soo maali, isla markaana dilkooda uu ka dambeeyay Wiil Soomaali ah oo qabay mid kamid ah Gabdh aha. Ciidamada Booliska Austria ayaa tegay Go obta uu dilka ka dhacay, iyaga oo xiray Wiilka So omaalida ah ee lagu tuhmayo dilka, kaas oo la sheegay inuu u adeegsaday mindi ama tooreey dilkooda.
Ehellada Gabdhaha la dilay ayaa Booliska ka codsaday in baaritaan lagu sameeyo dilka, isla markaana Maxkamad la horgeeyo qof kasta oo la gu helo dilka Gabdhahooda,.waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Ninka falka geystay uu isticmaalay Maandooriyaha khamriga.
Dalka Austria ayaa waxaa dhowr jeer oo hore siyaabo kala duwan loogu dilay muwaadiniin So omaali ah, waxaana dilalkaas badankood la shee gay inay geysteen So-omaali kale.
Maryan Cabdi Xuseen oo noqotay xildhib aan kii ugu horeeyey ee Soomaali
ah oo ku biirta barlamaanka Norway
Maryan Cabdi Xuseen oo ah haweenay ka soo jeeda Soomaaliya ayaa taariikh cusub sam eysay, ka dib markii ay noqotay qofkii ugu horre eyay oo Soomaali ah oo ka mid noqda baarlamaanka dalka Norway.
MaryanCabdi ayaa noqotay ha ween eydii ugu horeysay oo musl im ah oo ka soo dhex muuqato baarlam aanka No rway iyadoo xir an xijaab ka dib markii ay ka mid noqotay gol ahaas. ka hor xirfadeeda siyaasade ed, Mary an waxay ahayd guddoomiyaha Ururka Ardayda Soomaaliyeed (SSF), iyadoo ay ka mid ahayd xu bnihii aasaasay oo uu ka mid ahaa R/w asaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Maryan ayaa sheegtay inay siyaasadda u ga shay duruufo haysta bulshada ay ka dhalatay iyo guud ahaan shacabka dalkaas oo ay rumaysan tahay inay wax ka qaban karto hadii ay haatan ku guulaysatay inay ka mid noqoto baarlamaanka.
Qoraal uu soo saaray raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Kheyre ayuu ugu hambalye eyay Maryan Cabdi Xuseen guushii ay gaartay, maadaama ay noqotay xildhibaankii ugu horree yay oo Soomaali ah oo ka tirsan baarlamaanka Norway."Xildhibaanka cusub iyo dhammaan Soo maalida Norway,waxaan idinku hambalyeynayaa guushii taariikhiga ahayd ee Maryan,"ayuu ku yiri R/ wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter -ka
Jabuuti oo beenisay warar laga faafiyey xaala dda madaxweyne Geelle.
D/Jabuuti ayaa beenisay warar lagu faafiyey baraha bulshada oo la xiriira xaaladda caafimaad ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Warar kaas, oo Dorraad aad ugu baahay bara ha bulshada, sidoo kalena ay wer iy een warbaa hinta qaar, ayaa la gu sheegay in madaxweyne Geelle "lo ola car aray dalka Faransiiska , oo xaa laddi isa caafimaad ay liida to.”
Hase yeeshee waxaa wararkaas waxba kama jiraan ku tilmaamay Wasiirka Arrimaha Dibedda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf, oo qoraal soo dhigay bartiisa twitter-ka. "Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuu wanaagsan yahay. Dhamma an wararka la wareejinayo ee ku saabsan xaala ddiisa caafim aad waa kuwa ka fog xaqiiqda,” ayuu yiri Maxam uud Cali Yuusuf.
"Wuxuu fasax qaatay dhowr maalmood, wuxu una marayaa tijaabooyin caafimaad oo la xiriira nasasho la’aan oo ah inuusan ka tegin dalka xagaagan oo dhan,” ayuu ku daray.
Wasiirka ayaa sheegay in madaxweyne Geelle uu dhowr maalmood kadib dib u billaabi doono shaqadiisa. "Ma jiraan wax gaar ah oo laga wala aco,” ayuu yiri. M/weyne Geelle, oo 73 jir ah ay aa Jabuuti xukumayey tan iyo 1999-kii, waxaana bishii June ee 2021 loo doortay muddo xileedki isii shanaad.
Hoggaamiyaha kooxdii qarxisay masaajid ka Daarul Faaruuq oo lagu
xukumay 53 sano oo xabsi ah.
Hoggaamiyaha maleeshiyadii weerarkii qaraxa ahaa kusoo qaaday Masaajidka Darauf Faaruuq ee M/ Bloomington ee G/Minneso ta oo la yiraa hdo Emily Haris Ayaa lagu xu kumay 53 sanadod oo xabsiya ka dib markii lagu helay dha mmaan dambiyadii lagu soo eedeeyay.
Dacwadoogeyaasha ayaa ku rajo weynaa in Emily Haris, oo magaciisa afgarashada uu ahaa Micheal Haris in lagu xuk umo xabsi daa’in, ma adama uu hoggaaminayay kooxda weerarka ku soo qaaday masaajidka Daarul Faaruuq.
"Waa Illahey Mahadi in Dorraad la xukumay rag gii ku soo duulay oo qarxiyay Masaajidka Daar ul-Faaruuq, waa guul u soo hoyatay Muslimiinta Minnesota” ayuu yiri Imaam Maxamed Maxamu ud Maxamed Carab oo ah M/mulaha Masajidka.
Andres Folk oo ah ku simaha xeerilaaliyaha maxkamadda heer Federaal ee G/Minnesota ay aa sheegay in dhammaan dadkii ay wareysteen ay isku raaceen xanuunka & niyad jabka weerark an oo ahaa mid "islaam naceyk ahaa”.
Garsooraha maxakamadda Federaalka Dono van Frank oo ku dhawaaqay xukunka Haris oo 50 -jir ah ayaa sheegay in weerarkaas uu ahaa mid argagixiso ah.Jaaliyadda Soomaaliyeed & ho ggaamiyehaasha Muslimiinta Minnesota ayaa soo dhaweeyay xukunkii Dorraad oo barita ankiisusocday 3sano &bar.Masaajidkaa Daarul Faaruuq ayaa la weeraray bishii August ee 2017
Shiinaha oo caddeeyey inuu Somaliya kala socdo hawada sare & wixii uu
Safaaradda Shiinaha ee Muqdisho oo dhow aan loosoo diray Danjire cusub oo bedeley midkii hore ayaa soo bandhigtay sawir ay Shiinuhu ka qaadeen hawada sare oo ay Somalia ku jirto.
Sawirkan oo uu qaaday Cirbixiyeenka Shii nayska ah ee TANG Hongbo oo ku sugan Sa ldhi gcireedka Hawada Sare ee Shiina ha (CSS), ay aa waxaa ka muuqa naya fiiqa jasiir ad u ekaha Somalia oo eegaya ji-hada bari ee qorrax kasoo baxa dunida
Sawirka ayay deeto u duwayaan dhanka dhul ka sare ee Itoobiya iyagoo ka soo eegaya cirka mugdiga ah ee habeenkii ee ay nalalku dhulka ka muuqdaan.
Somalia ayaa ah dal ay dunida oo dhami sahmiso iyadoo ay xitaa jiraan dayax gacmeedyo garan kara macaadinta dhulka ku jirta iyo inta ay la’ egtahay, balse aysan dadkeedu war ka haynin wax ka badan kuraasi maran oo la iskugu haysto koo dii dhici kara inta badan.
Hoggaamiyayaasha Muslimiinta Kenya oo laamaha ammaanka ka dalbaday in jawaab laga bixiyo
afduubka Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad
2xildhibaan oo ka tirsan baarl-amaanka Ke nya ayaa Isniintii ku hanjabay inay tallaabo ka qa adi doonaan Xoghayaha Golaha Wasiirrada Arr imaha Gudaha (CS) Dr. Fred Matiang'i iyo tali yaha Guud ee Bo-oliiska Hillary Mutyambai ha ddii aysan si cad u sharraxin afduubka loo gey stay Aqoon-yahan Cabdiwahaab Sheekh Cabd isamad.
Xildhibaanka laga soo doorto Mvita Abdulswa mad Nassir iyo senetarka Momb-asa Mohamed Faki ayaa sidoo kale doonaya in labada masuul ay sharxaan kiisaskii ugu dambeeyay ee lagu laa yay dadka Kenyanka ah maadaama laamaha am niga dalka ay aamusan yihiin.
Naasir wuxuu sheegay inay qors-heynayaan inay toddobaadkan wada keen-aan mooshin wad ajir ah, ayna filayaan in madaxda ugu sarreysa amniga dalka ay hor yimaadaan baarlamaanka.
"Waxaan qorsheyneynaa inaan hor-geynno mooshin wadajir ah baarlamaanka iyo Senatedka 7 aadkan, sidaa darteed xoghayaha arrimaha Gu daha Fred Matiang'i, madaxa baarista dambiya da, George Kinoti iyo taliyaha guud ee Booliska Hillary Mutyambai, waxaan ka rabnaa inay iftiimi yaan sababta ay waxaas oo dhan u dhacayaan," ayuu yiri xildhibaan Abdulswamad Nassir.
Senator Faki oo lagasoo doortay Mombasa, ay aa sheegay inuu la yaaban yahay sababta ay do wladdu u aamusan ta-hay. Wuxuu intaas ku dar ay in dowladdu ay ka caga jiideysa inay wax ka qabato arri-ntan.
Waayitaanka Cabdiwahaab Sheekh Cabdisa mad, oo ahaa agaasimaha fulinta ee Machadka Daraasaadka Istaraatijiyadda Ge-eska Afrika, ayaa buuq ka abuuray dalka Kenya iyadoo qoys kiisa ay eedeeyeen ray-sal wasaaraha Soomaali ya inuu masuul ka yahay in la waayo.
Sirdoonka ugu sarreeya Mareykanka oo shee gay in Soomaaliya, Yemen, Suuriya iyo Ciraaq ay yihiin halista argigixiso ee ka weyn tan Afghanistan
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in han jabaadaha argigixiso ee ka imaana ya wadama da Soomaaliya, Yemen, Suuriya iyo Ciraaq gaar ahaan ISIS- ay ka khatar badan yihiin kuwa laga yaabo inay ka soo baxaan dalka Afgaanistaan. Agaasimaha Sirdoonka Qaranka Mar aykanka Avril Haine, ayaa hadalkaan ka sheegtay, iyadoo ka hadlaysay shir sannadeedka saraakiisha sirdoonka iyo Amniga Qaranka.
"Halista hadda ka imaanaysa kooxaha argaga xisada, Afghanista kuma jirto liiska ugu sarr eeya," ayay tiri Haines, oo intaas ku dartay in So oomaaliya, Yemen, Suuriya iyo Ciraaq loo ar ko in ay yihiin halista ugu weyn oo kusoo waj ahan Maraykanka.
20 sano ka dib weeraradii argagixiso ee Se btember 11, 2001, Haines waxay sheegtay in ay hanjabaadda ka imaaneya kooxaha argagixisada caalamiga ah ay si weyn hoos ugu dhaceen
Agaasimaha sirdoonka Maraykanka waxay she egtay in dadaal aad u weyn oo ka socda Mareyk anka uu keenay in aad loo yareeyo awoodda ay kooxaha Alqaacida iyo ISIS weeraro uga gey staan gudaha Mareykanka
Hoggaamiyayaasha India ayaa si walaac leh u eegaya qabsashada Taalibaan ee Afghanistan, ayaga oo ka cabsi qaba inay u faa’iideyn karto Pakistan, islamarkaana hurin karto muqaawam onimada gobolka Kashmir ee lagu muransan yahay.
Jen. Deependra Singh Hooda, oo ah taliyihii hore ee militariga India ee waqooyiga intii u dha xeysay 2014-2016, ayaa sheegay in kooxaha mi ntidiinta ah ee ku sugan xuduudda Pakistan "ay isku dayi doonaan inay dagaalyahano dheeri ah ku soo riixaan” Kashmir, kadib qabsashadii Taali baan ee Afghanistan.
Hooda ayaa sheegay inaan weli la saadaalin karin haddii qulqulka dagaalyaha nadaas ee Ka shmir "ay tiri ahaan noqon karaan kuwa awooda inay abuuraan xasillooni darro,” islamarkaana ho rseedaan isku dhac militari.
Dalalka deriska ah ee India iyo Pakistan ayaa laba dagaal uu ku dhex-maray gobolka Kashmir oo ay kala maamulaan la-ba qeyb, balse ay lab aduba si buuxda u she-egtaan.
Saraakiisha India ayaa ka welwelsan in Afg hanistan oo ay xukumayaan Taalibaan ay noqon karto saldhig ay dagaal-yahanada Kashmir isku soo abaabulaan.
Syed Salahuddin, oo ah hogga-ami-yaha isba heysiga kooxaha mucaaradka ee Kashmir, ayaa guusha Taalibaan ugu yeeray "mid aan caadi ah eyn oo taariikhi ah.”
Salahuddin, oo fadhiggiisu yahay qe-ybta Pak istan ay maamusho ee Kashmir, ayaa sheegay in uu rajeynayo in Taaliibaan ay gacan siin doonto dagaal-yahanada Kashmir. Si la mid ah, mustaq balka India wa-xaa ka adk aan doono jihaadiyiin ta Kashmir,” ayuu yiri.
Sanadihii tegay, carada ka taagan Kashmir ay aa sare usii kacday ka dib markii D/India ee uu hoggaamiyo xisbiga midig ee Hinduga ay Kash mir ka xayuubisay maqaamkii ismaamul. Saraaki isha India ayaa hadda rume-ysan in awoodda Ta alibaan ay sahli karo in dagaalyahano cusub oo la qoro iyo hub ay soo gali karaan qeybta Pak istan ee Kashmir.
Taalibaan oo ka hadashay qaraxi kadhacay kabul .
Afhayeen u hadlay kooxda Taliban ayaa cam baareeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha Kab ul, isagoo sheegay in goobta ay wax ka dhaceen ay tahay meel ay maamulaan militariga Marey ka nka."Xukunka Islaamiga ah waxa uu si adag u ca mbaareynayaa qaraxyada lagu bartilmaa meed saday dadka shacabka ah ee ku sugnaa garoon ka diyaaradaha Kabul,” ayuu Twitter-ka ku yiri Za bihullah Mujahid.
Afhayeenka ayaa intaas ku daray in qaraxy ada" ay ka dhaceen meel ay amnige-eda mas’uul ka yihiin ciidamada Mareyk-anka”. Suhail Shah een, oo sidoo kale ka mid ah afha yeennada Tal iban ayaa isagana sheegay in koo xdu ay "si dhow ula socoto amniga iyo difaacidda rayid keeda”, waxa uuna hadalkaas ku sheegay qoraal kale oo uu soo dhigay Twitter-ka
Madaxweynaha Suuriya oo 5 Sanno kadib bo oqasho ku tegay Ruushka.
Madaxweynaha Wadanka Ruushka Vladimir Puttin ayaa Aqalka Madaxtooyada wadanka Ruu shka ku soo dhaweeyey Mad-axweynaha Dalka Siiriya Bishaar Al Asad.
Wakaalada wararka Ruushka ee TA-SS ayaa warisey in labada Madaxweyne ay yeesheen kul amo gaar ah oo looga hadl-eyey Arimaha wadan ka Suuriya waana Markii ugu horeysey ee Mad axweyne Asad uu gaaro Ruushka wax kabadan 5 Sanno.
Madaxweyne Puutin ayaa dhigiisa Suuriya u ba lan qaaday in uu kala shaqeyneyo wadahadalo dhexmara Xukuumada Mr Asad iyo Mucaaradka dhinaca Siyaasada ee wadanka Suuriya sida la gu sheegey war lagu daabacay Bogga internetka Madaxtooyada Rushka.
Caro xooggan ayaa ka taagan dalka Talyaan iga kadib markii booliska ay xireen nin Soomaali ah oo toorey ku dhaawacay dhowr qof, maga alada waqooyi ee Rimini.
Afar haween ah iyo wiil lix sano jir ah ayaa la gu dhaawacay weerarka, oo dhacay habeennima dii Sabtida. Wiilka yar ayaa lagu warramay inuu xaalad halis ah ku sugan ya-hay, ayada oo dha awaca uu ka gaaray qoorta.
Booliska ayaa goor dambe ku guu-leystay in ay ka daba-tagaan, oo ay xiraan.
Dambi-baarayaasha ma rumeysna in sababta ninka ku dhiiri-gelisay weerarka ay tahay argag ixisanimo, hase yeeshee waxay la tahay inuu da roogo cabsanaa markii uu weerarka gaysanay ey.Soomaaligan ayaa Talyaaniga ka codsaday magangalyo, wuxuuna sida la sheegay deganaa goob ay maamusho hay’adda Laanqeyrta Cas oo ku taalla magaalada Ramini.
Sida ay ku warrantay wakaaladda wararka Tal yaaniga ee ANSA, tuhmanaha ayaa ku noolaa Yurub tan iyo 2015-kii, wa-xaana horey sharci loo ga soo diiday dalal dhowr ah, oo ay ku jiraan De nmark, Swe-den, Germany iyo Netherlands.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo la haysto Wasiirka Arrimaha Gudaha Talya-aniga Luciana Lamorgese ayaa Dorraad la ku-lantay mas’uuliyiin ta magaalada Ramini, si ay ugala hadasho dhac dadan. Waxay dambigan ugu yeertay "Dhacdo aad halis u ah.”
Weerarka ayaa waxaa ka dhashay caro xoogg an, oo ay hurinayaan kooxaha siyaasadda midigt afog, oo uga faa’iideysanaya inay sii kordhiyaan soogalooti nace-ybka.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenkii hore ee Talyaa niga, ahna hoggaamiyaha xisbiga midigta ee Le ga Nord Matteo Salvini ayaa ku cambaareeyey Lamorgese weerarka, wuxuuna ku baaqay xakameyn adag oo lagu soo rogo soogalootiga. "Wasiir Lamorgese, imisa dhibane oo kale ayey tahay inaan xisaabino ka hor in-ta aysan Italia noqon dal ammaan ah?,” ayuu ku yiri qoraal uu dhigay twitterka.
Arrimaha socdaalka ayaa Talyaaniga ka ah mowduuc aad u kulul, waxayna tani hurin kartaa naceyb hor leh oo loo qaado muhaajiriinta